(PRODUCT) RED mushandirapamwe uye kurwisa COVID-19 | Ndinobva mac
(PRODUCT) RED mushandirapamwe uye kurwisa COVID-19
Uye ndizvozvo patinotaura nezvazvo Apple uye kubatana kwayo ne (PRODUCT) RED Kuti tiwane mari zvirongwa zvekurwisa HIV neAIDS, tinofanirwa kutaura nezve makore gumi nemana kubatana kwakaburitsa madhora mazana maviri nemakumi mashanu emadhora muzvipo.
Gore rino mipiro yeApple iripowo mumushandirapamwe uyu unonzi (PRODUCT) RED asi mari yacho ichaenda kunorwa ne COVID-19. Imwe chikamu chemutengo wezvigadzirwa zveApple "zvitsvuku" yakagadzirirwa iyi homwe uye mune ino nyaya ichashandiswa kurwisa hutachiona hutsva uhu.
Dambudziko rakakonzerwa neCOVID-19 rinokanganisa zvirongwa zvakakosha kurwisa HIV neAIDS. Mune dzimwe nyika dzinopfuura zana dzeGlobal Fund, zvirongwa nemasevhisi ane chekuita nekurwisa HIV neAIDS ari kukanganiswa neCOVID-100.
Mukuru weApple, Tim Cook Akagadzirawo chinyorwa pane yake yepamutemo account yeiyo social network Twitter:
ichi #WorldAIDSDay, tinopa rukudzo kuvashandi vezvehutano vasinganeti kurwisa AIDS neCOVID-19 uye tinodada nekuvatsigira nemasiki echiso & nhoo. Kuburikidza ne14 yrs yedu @NET kubatana, takaunganidza madhora mazana maviri nemakumi mashanu ekurwira kupedza AIDS. https://t.co/5lSP2y9vVl
- Tim Cook (@iku_cook) December 1, 2020
Uye ndezvekuti kurwisa HIV neAIDS kuri kuoma nekuda kweCOVID-19 uye ndosaka zvakafanira kupa zviwanikwa zvihombe kupedza denda reiyo nyowani coronavirus nekukurumidza uye nenzira iyi ramba uchirwa pamusoro pezvimwe zvirwere.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » (PRODUCT) RED mushandirapamwe uye kurwisa COVID-19
Linux inogona kumhanya natively paM1 Macs munguva pfupi
Maitiro ekuwedzera tsika podcast kuApple Watch